Ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara (FAM) dia fikambanana na fiangonana natsangan'i Pasitera Mailhol André Christian Dieu Donné tamin'ny taona 1996. Mifototra manokana amin'ny fanazavana sy fampianarana ny misiterin'ny bokin'ny Apokalypsy ny fikambanana. Roa lahy tamin'ny voalohany ny mpianatra ary avy eo niitatra tamin'ny olona maro be manerana an'i Madagasikara. Ny hitory amin’ny olona rehetra maneran-tany ny Fanambaràn’i Jesosy Kristy voarakitra ao amin’ny Bokin’ny Apokalipsy no antom-pisian’ny FAM. Ny ampahafolon-karen’ny mpikambana no amatsiana vola ny hetsika sy ny asa rehetra karakarain’ny FAM.
I Mailhol André Christian Dieu Donné, raha mbola tsy pastora, dia nanomboka nampianatra ny Bokin'ny Apokalypsy niaraka tanin’ny namany roa tanin’ny taona 1993. Nanomboka namoaka ny fampianarany tamina fampielezam-peo tsy miankina izy tao Antananarivo tamin’ny taona 1994. Nisy fotoana nitsaharan’izany fampianarana izany nefa nisy fotoana nitohizany koa. Nanomboka nanao vondrom-bavaka sy fianarana isan-kerinandro i Mailhol tao Antananarivo ka lasa fikambanana izany afaka iray taona. Niorina amin’izay ny Association des Etudiants du Livre Prophétique de la Bible tamin'ny nanokanana an'i Mailhol ho Pastora tamin’ny taona 1996. Niova anarana izany ka lasa natao hoe Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara (FAM) tamin’ny taona 2003. Tsy nitsahatra ny fandefasana fandaharana am-pampielezam-peo isan-karazany sy amin’ny fahitalavitra. Niforona koa ny Radio Fanambaràna izay an'ilay fikambanana. Efa misy any ampitan-dranomasina ny FAM.
Miavaka ity fiangonana ity amin'ny fanalana devoly amin'ny alalan'ny fanondrona amin'ny fanondro sy ny faminaniana navoakan'ny Pasitera Mailhol: fialan'ny Prezida Ratsiraka teo amin'ny fitondrana, fiverenany teo amin'ny fitondrana, fametrahan'ny FFKM an-dRavalomanana eo amin'ny fitondrana, fanonganam-panjakana amin'ny 2009, fitondrany ny fanjakana aorian'ny 2013, anisan'ny mampiavaka ny Fiangonana Apokalypsy ihany koa ny fanazavana momba ny andro nahafatesan'i Jesosy Kristy dia ny antsasaky ny herinandro (Alarobia) araka ny fanazavan'ny Pasitera Mailhol.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fikambanana_Apokalypsy_eto_Madagasikara&oldid=920370"
Voaova farany tamin'ny 28 Oktobra 2018 amin'ny 19:11 ity pejy ity.